Home News Nabadoon lagu dilay Gobolka Gedo
Al-Shabaab ayaa xalay waxa ay weerareen degmada Bald-Xaawo ee Gobolka Gedo,halkaas oo ay ku sugan yihiin Ciidamada dowladda iyo kuwa Maamulka Jubbaland.
Mudo daqiiqado ah ayaa halkaasi waxa uu dagaal ku dhexmaray labada dhinac,iyada oo markii dambe ay degmada la wareegeen Al-Shabaab.
Waxaa soo baxaya haatan warar sheegaya in Al-Shabaab ay gowraceen Nabadoon Magaciisa lagu soo koobay Dhaqane,kaas oo Al-Shabaab ay gurigiisa ay ugu galeen.
Sidoo kale wararka aan heleyno ayaa waxa ay sheegayaan in Al-Shabaab ay wateen laba Wiil uu uu dhalay Nabadoonka.
Wararkii u dambeeyay ee saakay naga soo gaaraya degmada Balad-Xaawo ayaa waxa ay sheegayaan in Al-Shabaab ay dib uga baxeen degmadaas Balad-Xaawo,isla markaana ay kusoo laabteen Ciidamada Dowladda iyo kuwa Jubbaland.
Previous articleCiidamada Dowladda iyo Ururka Al Shabaab oo ku dagaalamay Gobolka Gedo
Next articleGudiga Doorashada Madaxtinimo ee Maamulka Koonfur Galbeed oo ku dhawaaqay jadwalka Doorshada
Kheeyre Maxeey tahay Sababta uu Yurub ugu Baxaayo!!
Hadal Farmaajo ka sheegay Baydhabo oo xiisad culus abuuray iyo Siyaasiin...